My World: Do you like Belgrade?
ပထမဆုံးစက်ဘီးလျှောက်စီး ဖြစ်တဲ့နေ့မှာပဲ စက်ဘီးလမ်း ဘေးမြက်ခင်းစပ်စပ်မှာ ကျောက်ပြားလေး၊ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ ဘေးဖက်မှာ အလှဆင်ပန်းခြောက်လေးတွေနဲ့၊ ကျွန်မ ချက်ခြင်းပဲ စိတ်ဝင်စားသွားတယ်၊ စက်ဘီးကိုရပ်ရင်း သေချာကြည့်မိတော့ သေဆုံးသွားတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက် ၀မ်းနည်းကြောင်းအမှတ်တရ ကျောက်ပြားမှန်းသိလိုက်ရတယ်၊ ကျန်ရစ်တဲ့မိသားစုဝင်တွေက ထားပေးထားတယ်လို့ အမျိုးသားကရှင်းပြပါတယ်။ ဂူသချိုင်းတွေမှာလို အရမ်းမကြီးလွန်း ခပ်ငယ်ငယ်ပါပဲ။ အမွှေးတိုင်လေးတွေလာလာပြီးထွန်းပေးကြတယ်။ နောက်ပိုင်း အဝေးပြေးလမ်းမတွေရဲ့ လမ်းဘေး ၀ဲ ယာ မှာ မကြာခဏ တွေ့ တွေ့ နေရပါတယ်။
နံရံဆေးခြယ်ပန်းချီထွန်းကားတဲ့ မြို့ပါ၊ စက်ဘီးစီးဖြစ်တဲ့ လမ်းမတလျှောက်နံရံတွေမှာ graffiti art တွေ နေရာတော်တော်များများတွေ့ရတယ်၊ တော်တော်ကြည့်ကောင်းတဲ့ လက်ရာမျိုးတွေလဲပါတယ်၊ ရထားတစ်စီးလုံး graffiti art တွေနဲ့ ဆေးခြယ်ထားတာလဲ တွေ့လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အများစုက စာလုံးတွေကိုပဲ အရောင်တွေ ဖြည့်သိပ်ထားကြပြီး သရုပ်ဖော်ပုံအနည်းအကျဉ်းလောက်ပဲ သုံးထားကြတယ်။ အိမ်နံရံတိုင်းမှာ စာလုံးတွေနဲ့လူငယ်တွေလက်တည့်စမ်း ထားကြတယ်။ မြို့လယ် အဆောက်အဦး အချို့မှာတောင် လက်တည့်စမ်းထားတဲ့ စာလုံး graffiti တွေ မညီမညာတွေ့ရတတ်တယ်။ အဆောက်အဦးတွေရဲ့နံရံတွေမှာ ပန်းချီဆွဲထားကြတယ်၊ တော်တော်အရွယ်အစားကြီးကြီးတွေဆွဲကြတယ်။ ကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့နံရံမှာ အမျိုးသမီးပုံ သစ်ပင်စိုက်နေဟန် နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်အပြည့်ရေးထားတာ တွေ့လိုက်ရသေးတယ်။ အမျိုးသမီးရဲ့ မျက်နှာကခပ်ဆွေးဆွေးဟန် ဖြစ်နေတာမို့ ကျွန်မက ကလေးငယ်တွေရဲ့ ကျောင်းနဲ့ သူ့ဟန်က မလိုက်ဘူးလို့ ကျွန်မအမျိုးသားကိုပြောပြတော့ ကျောင်းသွားရမှာ ကြောက်လို့နေမှာ ပေါ့တဲ့၊ သူလဲ နောက်ပိုင်း တော်တော် အစ အနောက်သန်လာပါတယ်၊ ကျွန်မက သိပ်နောက်တတ်တာကိုး၊ နေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့ဗုံးကြဲတဲ့အသံကိုလဲ သူ လုပ်ပြတတ်တယ်၊ "နေတိုးဘွန့်ဘ် ပလိစ်"ဆိုတာနဲ့ ဗုံးတလုံးကျလာသံ အနီးအဝေးအသံ နောက် ဗုံးကွဲသွားတဲ့ အသံမျိုးတူအောင်လုပ်ပြပါတယ်၊ တခါတခါ မအောင်မြင်တဲ့ဗုံးသံတောင်ပါလိုက်သေးတယ်။
Sava နဲ့ Danube မြစ်နှစ်စင်း က ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့ထဲ စီးဆင်းလို့ မြို့သူမြို့သားတွေလဲ ဒီမြစ်တွေပေါ် နေ့တိုင်းဖြတ်သန်းလှုပ်ရှားနေကြတယ်။ New Belgradeမှာ နေထိုင်သူတွေက Sava မြစ်ကိုဖြတ်သန်းလို့ သွားလာကြတယ်၊ Danube မြစ်ရဲ့ ညာမြစ်ကမ်းပါးတလျှောက် က Zemun ရပ်ကွက်ဟာ ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့ရဲ့ရှေးရှေးက လူချမ်းသာကြီးတွေ နေကြတယ်လို့ဆိုတယ်။ ဇီမန်ရပ်ကွက်ရဲ့ အဓိက လမ်းမကြီးက တော်တော်လေး လှတယ်၊ ကလေးလေးတွေပြေးလွှားဆော့ကစား နေကြပြီး ကော်ဖီဆိုင်တွေ၊ shopping center တွေပြည့်လို့၊ မီးတိုင်တွေကအစ ရှေးဟောင်းလက်ရာမျိုးလို၊ အဆောက်အဦးတွေကလဲရှေးဟောင်းလက်ရာမျိုးတွေပါ၊ အင်မတန်လှပတဲ့ ဇီမန်ရပ်ကွက်ပါ၊ ဇီမန် ကမ်းနားမှာ ပန်းချီပြခန်းဆောင်တွေလဲ တွေ့ရတယ်၊ ဆားလ်ဘီးယားမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာလိုပဲ ပြည်သူပိုင်သိမ်းတဲ့ ခေတ်ရှိခဲ့ပါတယ်၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီးအဆောက်အဦးကြီးတွေကို လက်လွှတ်လိုက်ရတဲ့ သူဌေးကြီးတွေလဲရှိတယ်။ အရင်က ရုပ်ရှင်ရုံပါတဲ့ ဟိုတယ် အကြီးကြီးတွေက အခုအခါပြုပြင်မွမ်းမံမှုမရှိတော့.. ထည်ဝါဆဲပုံသဏ္ဍာန်ရှိပေမဲ့ ခပ်အုပ်အုပ်ပုံစံ အနေအထားနဲ့ ... အလိုမကျတဲ့မှုန်ကုပ်ကုပ်အဘိုးကြီးတွေလို တွေ့ရပြန်တယ်။ ဇီမန်ရပ်ကွက်ရဲ့ မြစ်ကမ်းပါးကကြည့်ရင် ရွက်လှေတွေ ရွက်လွှင့်လို့ .. မြစ်ကမ်းပါးပေါ်မှာ ကလေးငယ်တွေနဲ့မိသားစု တွေ အစုလိုက်အစုလိုက်သွားလာနေကြတယ်။ ကမ်းပါးတလျှောက်အပင်တွေက ပြည့်သိပ်နေတော့ အအေးဓါတ် တော်တော်ကဲပါတယ်။ ဘယ်နေရာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက် ကလေးငယ်လေးတွေ ဆတ်တောက်ဆတ်တောက် လမ်းလျှောက်နေတာတွေ့ရတယ်။ တွန်းလှည်းလေးတွေထဲ ကလေးငယ်ငယ်လေးတွေထည့်လို့ လမ်းလျှောက်နေကြတဲ့ မိသားစုတွေလဲ တော်တော်များများတွေ့ရတယ်၊ ဒါတောင် ဆားရ်ဘီးယားမှာ ကလေးမွေးဖွားနှုန်းကျဆင်းနေတယ် လို့ ဆိုတယ်။
ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့လမ်းတွေပေါ်မှာ၊လူနေအိမ်တွေဘေးလမ်းတွေတစ်လျှောက်အပင်တွေတော်တော်များများတွေ့ရတယ်။ အပင်တွေက အရိုးအဆစ်ကြီးကြီးသန်သန်မာမာအပင်တွေအပြင်၊ ဆောင်းတွင်းမှာ ပါရှင်သန်နိုင်အောင် သဘာဝကပြုပြင်ပေးထားတာတဲ့ အပင်မျိုးလေးတွေပါ ရှိတယ်၊ ရာသီဥတုက အလျှင်အမြန်ပြောင်း တတ်တယ်၊ နေ့လည်ဘက် နေရောင်စူးရဲရဲ၊ အပူပြင်းထန်တဲ့နွေရာသီမျိုးမှာတောင် အဲဒီညနေခင်းတွေမှာအပူချိန်ရုတ်တရက်ကျသွားတတ်ပြီး၊ အဲဒီအအေးဓါတ်က ရန်ကုန်ဆောင်းထက်အေးပါတယ်။ မိုးလေ၀သခန့်မှန်းချက်ကို အမြဲသတင်းမှာစောင့်ကြည့်ကြတယ်။ အိမ်အပြင်ဘက် ပြတင်းပေါက်တွေဘေးမှာ အပူချိန်တိုင်းပြဒါးတိုင်လေးတွေထားကြပြီး အပြင်ထွက်ခါနီး အပူချိန်ကိုကြည့်အ၀တ်အစား ရွေးရသေးတယ်၊ အဆောက်အဦးတွေကလဲ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်အောင် ဆောက်ထားကြတော့ သူတို့ကို ကြည့်လိုက်မိတိုင်း စစ်တိုက်ခါနီး ၀တ်စုံပြည့်ဝတ်ထားတဲ့ စစ်သူကြီးတွေလိုပဲ မြင်မြင်နေမိသေးတယ်။ အခုလတ်တလောအခြေအနေမှာတော့ အဆောက်အဦးအသစ်ဆောက်ရင် bomb shelter အခန်းထည့်ဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်မျိုးရှိ မရှိ မသိပေမဲ့ အရင်ကအဆောက်အဦးဆောက်ရင် bomb shelter အခန်းထည့်ဆောက်ရပါတယ်။ အဆောက်အဦး တစ်ခုမှာ အားလုံးပုန်းခိုနိုင်မယ့် အခန်းတခန်းမျိုးပါ။ ဗုံးဒဏ် ထိမှန်ထားတဲ့ ပျက်ဆီးနေတဲ့ အဆောက်အဦးတွေကို အခုထက်ထိမြင်နေရဆဲပါ။ ကိုဆိုဗိုခွဲထွက်ရေးစစ်ပွဲအတွင်း နေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့ဗုံးကြဲတဲ့အခါ အမျိုးသားရဲ့ အဖွားက နေမကောင်းဖြစ်နေတာကြောင့် အိပ်ရာထဲက မထနိုင်တဲ့ အဖွားနဲ့အတူ အိမ်ခန်းထဲမှာပဲ နေခဲ့ကြတယ်၊ အမျိုးသားရဲ့ မိသားစုတွေတော့ ဗုံးကျင်းထဲ မဆင်းကြဘူးလို့ ပြောပြပါသေးတယ်။ ဗုံးကြဲမယ့်အချိန် ကြိုတင်ကြေညာထားခဲ့ပေမဲ့ target လွဲတဲ့ဗုံးတွေက စစ်ပွဲတိုင်းမှာရှိတတ်ပါတယ်။ target လွဲတဲ့ ဗုံးဆံတွေကြောင့် ထိခိုက်မှုများတာတွေရှိကြတယ်။ စစ်ပွဲတိုင်းဟာ စစ်ရဲ့ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေပေးကြစမြဲပါ။
ကျောဖက်၊ရင်ဘတ်နဲ့အတောင်ပံ၊အရင်းပိုင်းမှာ ခဲရောင်လိုလို၊ အဖြူရောင်ရောင်လိုလို အရောင်ပြေးနေတဲ့ ကျီးတွေကလဲ walnut(သစ်ကြားသီး)တွေ ကိုက်ချီပြီးအမြင့်က ပစ်ချ၊ ပြန်ဖဲ့ တစ်ခါ ပြန်ကိုက်ချီ အမြင့်ကိုပျံ ပြန်ပြီး ပစ်ချလိုက်နဲ့ ဥာဏ်ကြီးလှတဲ့ ကျီးတွေကိုကြည့်ပြီး အံ့သြရသေးတယ်၊ သစ်ကြားသီးရဲ့အစိမ်းရောင်အခွံပိုင်းက လက်နဲ့ တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်ရင် အင်မတန်စွန်းထင်းလွယ်ပါတယ်။ စွန်းနေတဲ့ အမည်းရောင်က ပြန်ဖျက်ဖို့ခက်လှတယ်၊ ဆံပင်ဆိုးဆေးလုပ်ရင်ရမှာပဲလို့ ကိုယ်ကတွေးမိရုံရှိသေး အဲဒီအစိမ်းရောင်အပြင်ဖက် အခွံပျော့ပိုင်းကနေ ဆံပင်ဆိုးဆေးလုပ်ကြတယ် လို့ ပြောပြကြတယ်။
ဒီက အပင်(ပန်းအလှပင်)လေးတွေက လဲ အရိုးတွေ တော်တော်သန်မာတယ်၊ ကျွန်မတို့ အခန်းပြတင်းပေါက်မှာ တန်းစီစိုက်ထားတဲ့ ပန်းပင်လေးတစ်ပင် သစ်သားယင်းလိပ်ကို ဆွဲချလိုက်ရင်း ပြတ်ကျသွားဘူးတယ်၊ ကျွန်မက ပန်းပွင့်လေးတွေနဲ့မို့ စိတ်မကောင်းတွေဖြစ်လို့၊ ကျွန်မအမျိုးသားက အေးအေးလူလူ၊ အဲဒီ အပင်ကိုင်းလေးယူပြီး ရေခွက်တခွက်ထဲ စိမ်ထားလိုက်တယ်၊ မသေပါဘူးတဲ့၊ နောက်၃၊ ၄ ရက်လောက်ဆို မြေကြီးထဲ ပြန်ထည့်စိုက်လို့ရပြီတဲ့၊ တကယ်ပဲ နောက်ပိုင်း မြေကြီးထဲ ပြန်ထည့်စိုက်လိုက်တော့ အပင်နောက်တစ်ပင် ပြန်ပေါက်နေရော၊ ရန်ကုန်မှာ မနက်တစ်ကြိမ်၊ ညနေတစ်ကြိမ် ဘုရားပန်းအိုးရေလဲ တတ်တဲ့ မေမေ့ကိုတောင် သတိရလိုက်မိတယ်၊ ပန်းအိုးထဲရေထည့်ထားပြီးရင် ၄၊၅ ရက်လောက်ထားလို့ရတယ်၊ ရေလဲပေးဖို့လဲ မလိုဘူး၊ သိပ်အေးတာကိုး၊
နောက် အမျိုးသားရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မေးပြန်တယ်၊ Do you like Belgrade? တဲ့၊ ဒီတစ်ခါလဲ စိတ်ထဲပေါ်လာတာပြောမိပြန်တယ်၊ ကားတွေမှာ၊ မြို့ထဲမှာ သီချင်းသံတွေမဆူဘူး၊ အဲဒါကိုကြိုက်တယ်လို့ ဖြေလိုက်မိတယ်။ ဒီက ကိုယ်ပိုင်ကား၊ ဘတ်စ်၊ ရထား(အမှန်က ကားရထား)တွေမှာ သီချင်းတွေမဖွင့်ကြဘူး၊ အပြင်ထွက်တိုင်း သီချင်းသံကြားရဖို့ခက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ဟိုနားဒီနား၊လဘက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ သီချင်းသံဆူညံတတ်တာရယ်၊ တက္ကစီကားငှားစီးတဲ့အခါမှာတောင် သီချင်းသိပ်ကြိုက်လွန်းတဲ့ ကားသမားနဲ့တွေ့ရင် သူဖွင့်ထားတဲ့ သီချင်းသံအကျယ်ကြီးကို အောင့်အည်းနားထောင်ပေးလိုက်ရတယ်၊ သည်းမခံနိုင်တော့လို့ နဲနဲတိုးပေးပါလို့ ပြောလိုက်ရင်လဲ ဆူဆောင့်ဆောင့်နဲ့ လျှော့တယ်ဆိုရုံလေးလျှော့ပေးတာမျိုးကြုံဖူးထားတော့ သီချင်းသံတွေမကြားရတဲ့ ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့မှာ သီချင်းမကြိုက်ကြဘူးလား လို့တောင် ပြန်မေးမိပါသေးတယ်။ ကားတစီးတလေပဲ သီချင်းသံကြားလိုက်မိတာရှိပေမဲ့ အများစုက သီချင်းကျယ်ကျယ်မဖွင့်ကြပါဘူး။
ဘဲလ်ဂရိတ် ဘိုဟီးမီးရမ်း(Bohemian)ရပ်ကွက်ရဲ့ စကာဒါလီယာလမ်းက နိုင်ငံခြားသားတွေ အများစုလာကြတယ်၊ အနုပညာရှင်၊ ပန်းချီဆရာ၊စာရေးဆရာတွေ စုကြတဲ့နေရာပါ။ အဲဒီလမ်းထဲက ကော်ဖီဆိုင်၊စားသောက်ဆိုင်လေးတွေမှာ ဆားလ်ဗီးယန်းတိုင်းရင်းသားဝတ်စုံဝတ်ပြီးတိုင်းရင်းသားတေးသံတွေကို အကော်ဒီယံ၊ ဂီတာနဲ့ ဖျော်ဖြေနေတာလဲတွေ့ရတယ်၊ ၁၈၃၀ ခုနှစ်လောက်က ဂျစ်ပဆီတွေအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့နေရာ လို့ဆိုတယ်၊ အဲဒီလမ်းလေးရဲ့ ထိပ်မှာ ဘောစ့်နီးယန်း စာရေးဆရာ၊ပန်းချီဆရာ၊ ကယ်ရီကေးချားရေးဆွဲသူ ဇူကို (Zuko Džumhur) ကျောက်စာတိုင်လေးမှာရေးသားထားတဲ့ စာကြောင်းတွေဟာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလှတယ်၊ ဇူကိုက လမ်းကလေး နေရာက ပြောပြနေဟန်ရေးထားတာပါ။
"My name is Skadarlija...or Skadarska street, however you like it. I am no boulevard...or avenue...or highway. I am common steep curved alley in the middle of Belgrade. And that would be everything meaningful to be told about me if it wouldn't be for my bohemian history, my crumbling roofs, my shaking chairs... " လို့ အစချီပြီးရေးထားတယ်။
အဲဒီလမ်းကလေးကို လာလည်ကြတဲ့ နာမည်ကျော်တွေထဲမှာ ဂစ်တာသမား ဂျီမီဟန်းဒရစ်ဇ်၊ ၄၁ကြိမ်မြောက်အမေရိကန်သမ္မတ ဂျော့ခ်ျ အိတ်ခ်ျ ဒဗလျူဘုရှ် (George Herbert Walker Bush), ယူဂိုဆလပ်ဗ်တော်လှန်ရေးသမား ဂျောစစ်ပ်ဘရောဇ်တီတိုး(Josip Broz Tito)၊ စပ်ိန်သမ္မတဂျူရန်ကာလို့စ်ဝမ်း(King Juan Carlos I of Spain)၊ အီတလီဆိုရှယ်လစ်သမ္မတဟောင်း စန်ဒရိုပါတီနီ(Sandro Pertini)နဲ့ စစ်တုရင်ကစားသမား အနာတိုလီ ကာပေါဗ့်(Anatoly Karpov)တွေပါတယ်၊ အဲဒီလမ်းလေးက စားသောက်ဆိုင်လေးတွေရဲ့နံရံတွေမှာ လာလည်ကြတဲ့နာမည်ကျော်တွေရဲ့ပုံတွေ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာ ချိတ်ဆွဲထားကြတယ်။
ဘဲဂ်ဂရိတ်မှာသရဲတစ္စေရှိတယ်လို့မကြားဖူးပေမဲ့ သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်ရှိတယ်လို့တော့ကြားဖူးတယ်လို့ အမျိုးသားပြောပြတယ်။ ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့က၁၅ကီလိုမီတာဝေးတဲ့ စကဲလာရွာလေးရောက်တော့ အိမ်မှာ သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်ကာကွယ်ဖို့ ကြက်သွန်ဖြူတွေတံခါးဝမှာချိတ်ဆွဲထားတာ တွေ့ရပါသေးတယ်။ ရွာလေးတွေမှာ အဲဒီအယူရှိကြတယ်၊ အိမ်တံခါးဝတွေမှာကြက်သွန်ဖြူတွေ ချိတ်ဆွဲထားကြတယ်။ မြို့မှာတော့အဲဒီလိုအယူမရှိတော့ပါဘူး၊ ဘဲလ်ဂရိတ်ကနေ စကဲလာရွာလေးရဲ့ လမ်းတလျှောက်ရွာလေးတွေ ဖြတ်သန်းခဲ့တယ်။ ရွာလေးတွေလို့ သူတို့က ပြောကြပေမဲ့ကာတွန်းစာအုပ်တွေထဲကလို ခေါင်မိုးချွန်ချွန်၊ ခေါင်မိုးနီနီ၊ ပန်းရောင်စုံ၊ မီးခိုးခေါင်းတိုင်လေးတွေနဲ့ အိမ်လှလှလေးတွေပါ၊ ပန်းတွေအများကြီးပဲစိုက်ပြီးအိမ်ကိုအလှဆင်ကြတယ်။
ဘဲလ်ဂရိတ်ကောင်းကင်မှာ တိမ်ထူထပ်ပုံဟာ အလိပ်လိုက်အလိပ်လိုက် ပြည့်သိပ်နေအောင် ထူထပ်လေ့ရှိတယ်။ တိမ်ထူထူမရှိ၊ တိမ်ကင်းစင်နေတဲ့အချိန် ကောင်းကင်မှာပျံသန်းနေကြတဲ့ လေယာဉ်တွေရဲ့ လေယာဉ်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်အဖြူရောင်အခိုးအငွေ့အစင်းလိုက် အစင်းလိုက်ကျန်နေခဲ့တာ အလွန်ကြည့်လို့လှပါတယ်၊ ကောင်းကင်ကလေထုစွတ်စိုမှုမြင့်မားတော့ လေယာဉ်ရဲ့ အင်ဂျင်ကထွက်တဲ့ အပူကြောင့်လမ်းကြောင်းတွေကျန်နေခဲ့တာဟာ လေကြောင်းလိုင်းများတဲ့နေ့ဆို လေယာဉ် ၄ စီး၊ ၅စီးရဲ့လမ်းကြောင်းတွေ တစ်ခုကို တစ်ခုက ထပ်လို့ကောင်းကင်မှာပြည့်နေတတ်တယ်။
မီးရောင်တွေမှာ အများအားဖြင့် အ၀ါရောင်မီးရောင်တွေ တွေ့ရတယ်၊ အဖြူရောင်မီးရောင်တွေ သိပ်မတွေ့ရဘူး၊ စကဲလာရွာလေးကအပြန် မှောင်ခါစညခင်းမှာ ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့ကို
အ၀ါရောင် မီးရောင်ကဲကဲ တလက်လက်တောက်နေတာတွေ့လိုက်ရတော့ ကုန်းမြင့်ထက်က ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့ရဲ့ အမြင့်ကိုပိုသတိထားမိလိုက်ပါတယ်။
Do you like Belgrade တဲ့
(နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ သမိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားတွေနဲ့ရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ကျွန်မ တွေ့ခဲ့ရ သိခဲ့ရသလောက် အဖြစ်အပျက်လေးတွေသာ ရေးထားတာပါ၊ အမှန်ကလဲ ဒီ့ထက်ပို မသိလို့၊ :D ကလာမန်ဒန်ခံတပ် (အခုတော့ပန်းခြံ)၊ အခုထက်ထိ တည်ဆောက်နေဆဲ ထူးခြားလှတဲ့ စိန့်ဆာဗာအော်သိုဒေါ့စ်ဘုရားကျောင်းတွေအကြောင်း ထပ်ရေးကြည့်ပါဦးမယ်၊ တခြား ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လူနေမှုစရိုက်လေးတွေရေးကြည့်ဦးမလားလို့)